पुस १०, २०७५ मंगलबार ११:५३:७ | टेकमान शाक्य
काठमाडौं – चितवनका अन्जान तिमल्सिना कार्यालयको लागि बिजुलीको चिम किन्न काठमाडौंको सुन्धारा नजिकैको एक होलसेल पसलमा पुग्नुभयो र चिम किन्नुभयो । सामान किनेपछि पैसा दिने र बिल लिने पालो आयो । अफिसले भ्याट बिल लिएर आउनु भनेकोले उहाँले भ्याट बिल माग्नुभयो । तर पसलेले भ्याट बिल दिन आनाकानी गरे । पछि पसल सञ्चालक भ्याट बिल दिन त तयार भए, तर १३ प्रतिशत भ्याट रकम सामानको मूल्यमा जोडेर ।
अब सुरुमा जति पैसा तिरेको हो, त्यो मूल्यमा सामान नआउने भयो । १३ प्रतिशत भ्याट रकम पनि अन्जानले नै तिर्नुपर्ने भयो । सेवा क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँ भन्दा धेरै र अरु क्षेत्रका ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी कारोबार गर्ने व्यापारी र व्यवसायीहरु भ्याटमा सूचीकृत हुनैपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । भ्याट बिल वितरण गर्दा आम्दानी बढी देखिने भएकोले पनि व्यापारीहरु सकेसम्म भ्याटबिल दिन नै मान्दैनन् । दिइहाले पनि सेवाग्राहीलाई नै तिराउँछन् ।
सुनधाराकै एक व्यापारीलाई भ्याट बिल दिंदा तपाईहरुलाई घाटा पर्छ कि पर्दैन ? भनेर प्रश्न गर्दा उनले भने, ‘हामीलाई कुनै घाटा हुँदैन, ग्राहकबाट नै लिएर दिने हो । भ्याट बिल लिने मान्छेलाई १३ प्रतिशत जोडेर दिने हो, सेवाग्राहीले १३ प्रतिशत बढी किन तिर्ने हो र भनेर मात्रै हो । उनीहरु नै भ्याट बिल लिन मान्दैनन् ।’
उदाहरणको लागि १ वटा मोबाइलको ‘ब्याट्री’को होलसेल मूल्य २ सय रुपैयाँ पर्छ भने त्यो खुद्रामा आईपुग्दा ५ सय भन्दा बढी पर्न आउछ । यो भनेको १ सय ५० प्रतिशत भन्दा पनि बढि हो । बस्तुको मूल्य हेर्दा उनीहरुले बस्तुमा नाफा सहित १३ प्रतिशत मात्रै होइन अरु मूल्य पनि जोडेर मूल्य निर्धारण गरिएको हुन्छ ।
२ सयमा किनेर ५ सयमा बेच्ने व्यापारीले १३ प्रतिशत भ्याटसहित जोडेर ५ सयभन्दा बढीमा बेच्ने गरेको पाईन्छ । उसले सुरुमा ल्याउँदा २ सय रुपैयाँ सामानको २६ रुपैयाँ तिरेको हुन्छ तर उसले सेवाग्राहीसँग ५ सयको १३ प्रतिशत अर्थात ६५ प्रतिशत उठाएको हुन्छ । यो हिसाबमा ३९ रुपैयाँ फरक पर्न आउँछ ।
भ्याटको आधार भनेको बिल नै हो । भ्याटमा दर्ता भएका हरेक फर्मले कारोवार गर्दा बिल काट्नुपर्छ । बिल नकाटी कारोबार गरेका भ्याट प्रभावकारी हुन सक्दैन । बिल लिने र दिनेबीच तलमाथि हुँदा यसको घाटा सरकारी ढुकुटीमा पर्न जान्छ ।
एक सय रुपैयाँको कारोबार बिलबिना भयो भने सरकारलाई १३ रुपैयाँ घाटा लाग्छ  । काठमाडौंंको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्युरोड, पुतलीसडक, बानेश्वरलगायत क्षेत्रमा अहिले पनि बिनाबिलको सामान बेचबिखन हुँदै आएको पाइन्छ । भ्याटमा दर्ता भएका करदाताले खरिद र बिक्री खाता व्यवस्थापन गरी मासिक वा त्रैमासिक रूपमा भ्याटको विवरण कर कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
मूल्य अभिवृद्धिकर भ्याट भनेको सरकारलाई वस्तु र सेवाको उपभोग गरेवापत तिर्ने कर हो । सरकारलाई तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशत कर समेत जोडेर सेवाग्राहीले व्यापारीलाई रकम बुझाउनुपर्ने भएपछि कतिपयले भ्याट बिल नै लिंदैनन् । उदाहरणकै लागि १ लाख रुपैयाँको सामान किन्ने ग्राहकले अरु १३ हजार रुपैयाँ कर वापतको रकम दिनुपर्ने हुन्छ । बरु सामान्य बिलमै चित्त बुझाउछन्, उनीहरु कर वापतको रकम तिर्न तयार हुँदैनन् ।
यसो गर्दा होलसेल ब्यापारीको कुल बिक्री मूल्य कम देखिन्छ भने किन्नेले पनि १३ हजार रुपैयाँ बढी तिर्नु नपर्ने हुन्छ । उनीहरुमा सरकारलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने धारणाको विकास नहुनु र व्यापारीप्रति पूर्ण विश्वास नहुनले नै यस्तो अवस्था सिर्जना भएको आन्तरिक राजश्व विभागको तर्क छ ।
प्यानमा दर्ता गर्दा लेखापढी पनि गर्न नपर्ने र सरकारलाई कर पनि बुझाउनु नपर्ने भएकाले उद्योग सञ्चालक यतातिर आकर्षित भएको देखिन्छन् । छोरा, छोरी, श्रीमती, मामा, भान्जा इत्यादीको नाममा फरक फरक कम्पनी दर्ता गरेर एकै व्यक्तिले कम्पनी सञ्चालन गरिरहँदा सरकारी आँखा यतातिर सोझिएको देखिंदैन ।
उत्कृष्ट करदाता भनेर सरकारले पैसाको आधारमा सम्मान बाँड्ने गरेको छ । जसले धेरै कर सरकारलाई बुझायो, त्यसैलाई उत्कृष्ट करदाता भनेर तक्मा भिराईने गरिएको छ । यो न्यायोचित कदम होइन । किनकी, १० लाख रुपैयाँ लगानी भएका कम्पनी र १ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएका कम्पनीले बराबर कर बुझाउन सक्दैनन् ।
यी दुई प्रकृतिका उद्योग कलकारखानामध्ये कुन बढी जिम्मेवारी छ ? भन्ने कुरालाई महत्वपूर्ण दिइएन । १० लाख रुपैयाँ लगानी गरिएका कम्पनी बढी जवाफदेही भएको छ भने, उनीहरु उत्कृष्ट करदाता बन्नुपर्छ ।
१ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको कम्पनीले लाखौँ रुपैयाँ कर छली गर्दा पनि उसले जति कर १० लाख रुपैयाँ लगानी भएको कम्पनीले तिर्न सक्दैनन् । उत्कृष्ट करदाता छनोट गर्दा पैसामा नभई जवाफदेहीतालाई महत्वपूर्ण स्थान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
सेवाग्राहीसँग १३ प्रतिशत भ्याट असुल गरेर नै व्यापारीले रकम लिने आन्तरिक राजश्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेलले बताउनुभयो । ढुँगेलको यस्तो भनाई आईरहँदा व्यापारीहरुले गोलमाल हिसाबकिताब देखाएर करछली गरिरहेका छन् । कागज मिलाएर सरकारी खातामा जाने पैसा आफ्नै खल्तीमा हालिरहेका छन् ।
किनेको सामान पनि नबेचिएको अर्थात् सुरुमा नै कम सामान देखाएर कागज बनाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न नसक्दा सरकारले बर्सेनि अरबौँ रुपैयाँ कर गुमाउँदै आउनुपरेको छ । उदाहरणकै लागि एक व्यापारीले १ करोड रुपैयाँको सामान किन्यो तर, ९० लाख रुपैयाँको मात्रै बिक्री भएको देखियो भने उसले नगद कर नतिरे पनि हुन्छ । भ्याट बिल दिएपछि कारोबार बढी देखिने डरमा भ्याट विल दिन आनाकानी गरेको हुन सक्ने ढुंगेलको भनाई छ ।